Surfshark: famerenana ny "antsantsa" serivisy VPN | Avy amin'ny Linux
SurfsharkAmin'ny maha mpihaza an-dranomasina marina azy dia nahavita nihinana mpifaninana marobe tamin'ny sehatry ny serivisy VPN. Ka raha te hanana ny hozatry ny Surfshark ianao dia milaza aminao izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny serivisy, na ny mahatsara azy na ny maharatsy azy.
Azonao atao ny manapa-kevitra ny hanakarama ny Serivisy VPN ary arovana mandritra ny fifandraisanao amin'ny ho avy, ho fanampin'ny fankafizana ny anarana tsy fantatra anarana sy ireo tombontsoa hafa atolotry ity karazana serivisy ity. Tsarovy fa izao miaraka amin'ny fanabeazam-pifandraisana sy fanabeazana lavitra, VPN dia serivisy lehibe kokoa ...
Te hanandrana an'ity VPN ity ve ianao? Araraoty Tolotra fihenam-bidy 81% ananany anio.
1 Inona no atao hoe VPN?
2 Ny zavatra tokony ho fantatrao momba ny SurfShark VPN
2.7 Vidiny [Tolotra zoma mainty]
3 Ahoana ny fampiasana Surfshark VPN
Inona no atao hoe VPN?
Una VPN (Tambajotra tsy miankina virtoaly), na tambajotra tsy miankina virtoaly, dia serivisy ahafahanao mizaha Internet amin'ny alàlan'ny fantsom-pifandraisana azo antoka izay ahazoanao antoka ny data sy ny fiainanao manokana rehefa mizaha. Tsy ny angon-drakitra nafindra ihany no havoaka hanafina azy ireo amin'ny mason-koditra, manafina ny tena IP anao koa izy ary manome anao iray hafa ho an'ny anarana hafa.
Ity dia tsy manome anao filaminana sy tsiambaratelo, fananana IP hafa avy amin'ny firenena hafa, azonao atao koa mamoha atiny voafetra na voarara ao amin'ny faritra jeografika misy anao. Ohatra, ho an'ny sehatra streaming maro be izay manana atiny izay tsy misy ao amin'ny firenenao, serivisy izay any amin'ny firenena hafa ihany, sns.
Amin'izao fotoana izao, miaraka amin'ny areti-mandringana, ny telefaona sy fanabeazana lavitra. Soso-kevitra ihany koa aho ny manana VPN ho an'ireo tranga ireo. Amin'ity fomba ity dia azonao antoka fa voafehy ny mombamomba ny zaza tsy ampy taona, ary koa ny fampahalalana marefo rehetra tantana amin'ny asanao (zon'ny mpamorona, antsipirian'ny banky, antontan-taratasy manokana, ...).
Na mitady ianao fiarovana, anarana tsy fantatra anarana, na manala serivisy, tsy hisalasala intsony aho mividy serivisy VPN hankafizako ny tombony rehetra manomboka izao ...
Ny zavatra tokony ho fantatrao momba ny SurfShark VPN
Raha mieritreritra ny handray ny serivisy Surfshark VPN ianao dia tokony hahalala antsipirihany teknika hahafantarana ilay tombony sy lesoka amin'ity serivisy ity, ary raha tena mifanaraka amin'ny ilainao. Eto aho dia manasongadina ny antsipiriany rehetra tokony ho fantatrao ...
Raha ny amin'ny seguridad, Surfshark dia manome serivisy tena tsara. Miaraka amin'ny repertoire-n'ireo haitao matanjaka hiarovana ny fifandraisanao noho ny fikajiana marika miaramila miaraka amina algorithm AES-256. Ho fanampin'izany, ao anatin'izany koa ny rojo roa sosona MultiHop, mamela ny angon-drakitra ho voahidy amin'ny mpizara roa na maromaro, izay manaparitaka ity safidy ity ary mahatonga azy io ho azo antoka kokoa.
Mazava ho azy, manana kaody azo antoka toy ny OpenVPN sy IKEv2 izy io. Ary ny sasany fiasa fanampiny toy ny CleanWeb, hanakanana ny doka pop-up, fandrahonana malware, mpanaraka an-tserasera, ary dokambarotra mahasosotra toy izany. Amin'izany ianao dia afaka mivezivezy milamina kokoa.
Zava-dehibe ny manamarika fa manana izany Kill Switch manapaka rehefa tsy miasa intsony ny VPN. Fiantohana tsara izany hisorohana ny sivana data, satria tsy manana an'io safidy io ny serivisy hafa ary raha misy antony tsy hijanonan'ny VPN dia tsy ho tsapanao izany ary hanohy hitety toa tsy misy ianao, nefa tsy fantatrao fa ianao dia tsy eo intsony. voaarovan'io tionelina voaroaka io. Miaraka amin'ny Kill Switch, raha misy zavatra mitranga dia mampifandray anao izany mba tsy hanimba anao.
Raha kely fotsiny aminao izany rehetra izany dia miantehera DNS tsy miankina DNS Zero-fahalalana hisorohana ny asan'ny mpampiasa Surfshark tsy ho voahangy.
Mba hanamarinana izany rehetra izany dia nanakarama orinasa iray i Surfshark cybersecurity antsoina hoe Cure53 hanadihady ny tolotra ataon'izy ireo, hahazoana valiny tena tsara ...
La hafainganam-pandeha Zava-dehibe iray hafa koa izany raha miresaka VPN, satria amin'ny alàlan'ny fanoratana data dia ho hitanao ny fihenan'ny fampisehoana amin'ny Internet. Soa ihany, Surfshark dia manana mpizara mihoatra ny 1000 any amin'ny firenena 60 mahery. Tambajotra lehibe iray mamela ny fitazonana hafainganam-pandeha tena tsara, miaraka amin'ireo mpizara somary be loatra, izay tsara ihany koa.
Rehefa mitady serivisy VPN tsara, ny fiainana manokana ny mpampiasa na ny mpanjifa dia zava-dehibe. Surfshark dia mampanantena fa hanaja izany tsiambaratelo izany miaraka amin'ny politikany tsy misy kitay, izany hoe tsy mitahiry ny mombamomba ny mpampiasa (tsy misy IP, tsy misy hetsika fizahana, tsy misy tantara, tsy misy mpizara ampiasaina, tsy misy bandwidth ampiasaina, tsy misy session, ora mifandray, fifamoivoizana sns. .).
Ny zavatra fisoratany dia ny adiresy mailaka anaovanao fisoratana anarana amin'ny serivisy Surfshark sy ny mombamomba ny billing izay andoavanao ny fandoavam-bola ...
Ary farany, momba ny Ny fangatahan'ny DMCA, Surfshark dia miorina ao amin'ny Nosy Virgin British. Iray amin'ireo "paradisa ara-dalàna" izay tsy ananan'izy ireo lalàna manohana ireo fangatahana ireo, ka hajaina ny fiainanao manokana sy ny filaminana.
Ny serivisy VPN mazàna dia misy fanampiny fanampiny hanomezana fahafaham-po ny mpampiasa azy. Raha mamakafaka ny serivisy Surfshark ianao dia hitanao fa tena mandaitra izy io mivantana hanafoanana ny atiny, ohatra, Netflix. Fanampin'izay, mahomby tokoa izy amin'io lafiny io raha ampitahaina amin'ny mavesatra mavesatra mifaninana.
Ankoatra izany Netflix, izy io dia miasa miaraka amin'i Hulu, BBC, iPlayer, sns. Izy rehetra miaraka amin'ny hafainganam-pandeha tena tsara sy maharitra.
Raha mitady VPN hisintomana koa ianao dia tokony ho fantatrao fa ny Surfshark dia tsy manakana ireo kavina P2P sy tondra-drano. Noho izany, azonao atao ny mampiasa mpanjifa P2P sy Torrent mba hisintomana izay ilainao ary hizara angona. Manana serivera manokana aza izy ireo hanatsarana ny fanohanan'ny P2P.
Surfshark dia manana maromaro fampiharana sy fanitarana an'ny mpanjifa. Izy rehetra dia tena mora ampiasaina mba tsy hanananao olana bebe kokoa amin'ny fanaovana an'io serivisy io amin'ny sehatra misy anao. Ohatra, azonao atao ny mampiasa ny fampiharana ho an'ny Windows, macOS, iOS ary Android. Izy io koa dia manohana ny GNU / Linux, Fire TV, Apple TV, Smart TV, PlayStation, Xbox ary ny fanitarana ho an'ireo mpitety Firefox sy Chrome.
Fanohanan'ny mpanjifa Surfshark dia tena tsara. Ny fahatsapana avelany dia tsara, miaraka amin'ireo agents izay manatrika anao amin'ny chat 24/7, mamaly haingana sy valiny tena ilaina hamahana olana. Izy io koa dia manohana ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny mailaka, raha tsy tianao ny resaka amin'ny fotoana tena izy.
Raha tianao ny manao zavatra samirery, dia nanao koa izy ireo fampahalalana marobe azo ao amin'ny tranokalany, miaraka amina fampianarana momba ny fametrahana, fikirakirana, FAQ, sns.
Vidiny [Tolotra zoma mainty]
Raha manapa-kevitra ny handray ny serivisy Surfshark VPN ianao izao dia tokony ho fantatrao izany drafitra famandrihana Manana amidy amin'ny zoma mainty izy ireo.
Matetika, famandrihana Manomboka amin'ny € 10,89 / volana izy ireo raha 1 volana ny serivisinao, € 5.46 / volana raha ataonao mandritra ny 1 taona, ary € 1.69 / volana raha mividy faharetan'ny 2 taona ianao. Amin'izany ianao dia hanana angon-drakitra tsy voafetra ary ho afaka mampifandray tsy misy fetra ireo fitaovana tadiavinao miaraka.
Ankehitriny miaraka amin'ny Zoma Mainty manana tolotra ianao miaraka a Fihenam-bidy 83%. Tena mahavariana. Izany hoe, fa tsy ny € 10.89 / volana, € 1.86 / volana ihany no aloanao. Ary, ho fanampin'izay, hanana serivisy maimaimpoana mandritra ny 3 volana ianao anio ...
Ary raha te hahalala ny bola fomba, azonao atao ny mampiasa ny carte de crédit (VISA / MasterCard) anao, na mampiasa fomba nomerika hafa toa ny PayPal, Google Pay, Amazon Pay, sns. Ary raha aleonao ny mitonona anarana betsaka indrindra, azonao atao ihany koa ny mampiasa izany amin'ny crypto.
Ahoana ny fampiasana Surfshark VPN
Raha nanapa-kevitra ny hametraka fiarovana sy tsiambaratelo kely amin'ny fiainanao an-tserasera ianao amin'ny farany ary maniry ny hanakarama Surfshark dia tokony ho fantatrao fa ity VPN ity dia azo ampiasaina amin'ny fomba mora manaraka dingana tsotra vitsivitsy:
Raha vantany vao nahazo tombony tamin'ny tolotra Zoma Mainty sy manana firaketana ianao, ny zavatra manaraka dia miditra amin'ny faritra fampidinana avy amin'ny Surfshark, safidio ny sehatra misy anao, ampidino ny rindrambaiko, apetaho amin'ny rafitrao na tranokala mpitety tranonkala.
ankehitriny mihazakazaka ny fampiharana / extension browser ary ampidiro ny angona fisoratana anarana.
Rehefa tafiditra ao ianao dia afaka miroso amin'ny mifandray tsotra bokotra iray monja, na manaova toerana mandroso raha ilaina izany (safidio ny mpizara hanova ny firenena IP,…).
Etsy andaniny, raha manana maro ianao fitaovana mifandray, na IoT, Ao amin'ny tranonao manan-tsaina dia azonao atao ihany koa ny manamboatra ny VPN amin'ny router mifanentana aminao ary voaro afovoany ny fitaovana rehetra mifandray amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny router.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tambajotra / seriver » Surfshark: famerenana ny "antsantsa" serivisy VPN
Durden, tontolon'ny birao ho an'i Arcan
Arcan, rafitra iray hamoronana tontolo iainan'ny GUI sy ny birao